Filtrer les éléments par date : mercredi, 30 septembre 2020
mercredi, 30 septembre 2020 20:53
300 000ar ny kojakoja sy vola ilaina mampiditra mpianatra
Pilo kely: 300 000ar ny kojakoja sy vola ilaina mampiditra mpianatra iray hianatra, miandry Tosika Fampianarana ireo Ray aman-dreny, na amin'ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana.
Mila jerena manokana ity fampianarana izay teren'ny Lalampanorenana mihitsy ny ampianarana maimpaimpoana ny zaza hatramin'ny kilasy T9 (3ème) Ambaratonga voalohany (Andininy 24).
Jereo ireo mpampianatra, indrindra ny FRAM, jereo ny sekoly sy ny fotodrafitrasa, aza atao tapi-maso volom-boasary fotsiny, jereo ny programam-pampianarana mifototra amin'ny fampandrosoana isam-paritra.
Na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana dia mampianatra zaza Malagasy avokoa ireo ka mila fanohanana.
Manao izay anjara biriky vitako aho anampiana ny fampianarana, io no lalana tokana mampandroso antsika, rehefa mahay ny vahoaka, izy ihany no ampandroso ny tenany sy ny fianakaviany.
mercredi, 30 septembre 2020 20:44
HVM: Namaky bantsilana ny tsy fahombiazan’izao fitondrana izao
Natolotra taty Ambatondrazaka androany ny mpandrindram-paritra ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara, na HVM Alaotra Mangoro, dia ny solombavambahoaka teo aloha Andrianirina Josoa Marohajaniaina.
Tonga nanolotra azy ny Loholona HVM isany Malo Benoît sy Rafidiarison Jean Rémi Gabriel. Nandritra izany no nanaovan’ireto farany vaky bantsilana fa tsy mahomby izao fitondrana izao, ary diso fanantenana tanteraka ny Vahoaka.
mercredi, 30 septembre 2020 20:23
Doro tanety mampiasa vorona
Izay mandoro tanety mandoro Tanindrazana, hoy ny fiteny fanentanana ifampitàna isan-taranaka mifandimby.
Misy dia tena misy tokoa anefa ny olom-pirenena maka fahafinaretana amin’ny fandoroana ny tanety, indrindra amin’izao vanim-potoana mahamaina ny tany izao.
Tato ho ato dia manomboka mainty ny lanitr’Iarivo noho ny setroka miainga avy any ambany atsinanana.
Mampiasa vorona toy ny kibobo azo sambo-belona ireo mpilalao afo, araka ny angom-baovao eny amin'ny fiaraha-monina eny.
Rariana vanjan’afokasoka miaraka amin’ny vorodamba ny tongotry ny vorona.
Arehitra ilay lamba ary alefa misidina ilay biby tsy manantsiny.
Tetikasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny hametraka toerana hivarotana « voiture d’occasion » etsy Andohatapenaka akaikin’ny kianja Maki.
Kasaina hovitaina alohan’ny faran’ity taona ity ny asa.
Kaominina Mandritsara- Vakinankaratra: Haverina ny fifidianana Ben’ny tanàna
Namoaka didy ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana Antananarivo, fa hisy fifidianana Ben’ny tanàna vaovao ao amin’ny Kaominina ambanivohitra Mandritsara, Distrikan’i Betafo, Faritra Vakinankaratra taorian’ny nahafaty ny Ben’ny tanàna voafidy farany tao, Rakotondranaivo Roger ny 18 jolay 2020 ka nahabanga io toerana io.
mercredi, 30 septembre 2020 12:06
1RFI Ivato: Fankalazana ny andron’ny masina misely teo anivon’ny miaramila
Nankalazaina ny 29 septambra 2020 teny amin’ny 1RFI Ivato ny Andron’ny Masina Misely, mpiaro ny mpilatsaka an’elon’aina, izay fanao isan-taona eo anivon’ny Tafika, ka tamin’ity taona ity dia nanome voninahitra izany lanonam-pankalazana izany ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta Ntsay Christian.
Lanonana izay teo ambany fitarihan’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena ary notronin’ny Minisitry ny Filaminana anatiny, ny Tale kabinetran’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, ny Lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika, ireo manamboninahitra Jeneraly, ireo manamboninahitra ambony, ireo manamboninahitra lefitra, ireo miaramila an-daharana, ireo miaramila rehetra eo anivon’ny Rezimanta voalohan’ny hery vonjy taitra, ary ny fianakaviamben’ireo mpilatsaka an’elon’aina.
mercredi, 30 septembre 2020 09:21
Station Forestière Ambatofotsy: Nirehitra ny alam-panjakana
Nirehitra ny alam-panjakana tao amin’ny Station forestière tao Ambatofotsy halina.
Nifarimbona Vondron'olona voaofana amin'ny ady amin'ny afo, ny pompier, olomboafidy, ekipan’ny ministeran’ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy tamin’ny famonoana ny afo.
Naharitra adim-pamantaranandro efatra mahery vao maty tanteraka ny afo.
Alam-panjakana fa tantanina rafitra tsy miankina ny Station forestière ao Ambatofotsy.